Imvunulo ejwayelekile yeVeracruz, ukuhlanganiswa phakathi kwamasiko aseMexico naseSpain | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 13/04/2021 09:54 | Cultura, I-México
Imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz iyaphendula, ngakolunye uhlangothi, esiqeshini esizenzakalelayo sombuso waseMexico, ngakolunye uhlangothi, ethonyeni lamakoloni aseSpain. Kuyiqiniso ukuthi wonke amadolobha asendaweni yaseVeracruz ngisho nasezweni lonke babe neyabo izingubo ezijwayelekile, kepha kunesudi echaza umbuso kanye nenhloko-dolobha yawo yomibili.
Njengoba iVeracruz isogwini olusempumalanga ye I-México futhi inesimo sezulu esishisayo esishisayo, izingubo zayo ezijwayelekile kufanele, ngamandla, zikhanyise futhi zingafudumali kakhulu. Isilinganiso samazinga okushisa esidlula amadigri angamashumi amabili asinakubekezelelwa unyaka wonke ngezingubo ezifudumele. Kepha kunezinye izinto eziningi ezinqume ukuthi imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz. Uma ufuna ukubazi, sikumema ukuthi uqhubeke nokufunda.
1 Umlando wemvunulo ejwayelekile yeVeracruz
2 Injani isudi ye-jarocho
2.1 Imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz yabesifazane
2.2 Imvunulo ejwayelekile yeVeracruz yamadoda
3 Kusetshenziswa nini imvunulo ejwayelekile ye-jarocho
Umlando wemvunulo ejwayelekile yeVeracruz
Into yokuqala okufanele sikuveze yona ukuthi izwe laseVeracruz lisebenzisa i- I-charro suit futhi i Ikhabethe leTehuano. Lesi sakamuva sasetshenziswa ngabesifazane baseZapotec bezwe lase Oaxaca futhi wabulawa ngumdwebi Frida khalo emidwebweni yakhe eminingi. Kepha lokhu kanye nokwokuqala sekuyizimpawu zomhlaba zaseMexico. Ngakho-ke, ngeke kukumangaze ukuthi nazo ziyafana neVeracruz.
Naphezu kwakho konke esikuchazele kona nje, imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz ibizwa kahle isudi yesikhwama, evela kulokho okubizwa ngokuthi Sotavento Veracruzano, okungukuthi, esifundeni sombuso sakhiwe kanjalo esisukela eningizimu yesifunda esifanayo. Futhi, le ngubo inomlando othakazelisa kakhulu.
Kuthiwa abesifazane bokuqala bafika nabaseSpain ku Umcengezi wasePapaloapan babejwayele ukugqoka izingubo ezivela ePeninsula yase-Iberia. Kade Izingubo zesitayela se-Andalusian noma iLevantine eyenziwe ngezindwangu ezimnyama nezisindayo. Kepha kule ndawo yaseVeracruz, njengoba sikutshele, kuyashisa kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, umswakama ubusa kakhulu. Ngakho-ke, izingubo ezalethwa zivela eSpain zazingafanele, ngoba zazenzelwe izindawo ezibandayo.
La masudi abesifazane ayehlanganisa iziketi ezimibalabala, iphinifa elifekethisiwe, itshali lentambo, amasokisi amatshe okotini nezicathulo ze-velvet. Ngaphezu kwalokho, babehlotshiswe ngezindondo ezinamathiselwe entanyeni ngamaribhoni kasilika noma ivelvet uqobo.
IVeracruz imvunulo ejwayelekile yabesifazane
Kodwa-ke, abesifazane bomdabu babegqoka iziketi ezinezimbali namablawuzi ngentambo ye-bobbin futhi behlise amahlombe, kanye nezicathulo ezinesimo sama-clogs. AbaseSpain baqonda ukuthi kanjani ifaneleka ngokwengeziwe le ngubo yesimo sezulu saseVeracruz futhi baqala ukushiya izingubo ababeze nazo bevela eSpain.
Njengenhlanganisela yemvunulo yasendaweni enamathonya athile aseSpain, i- isudi yesikhwama, nayo yamukela amafomu afanayo kwabesilisa. Ngakho-ke, inqubo yokuhlanganisa phakathi kwemfashini yenhlonipho neyomdabu evela eSotavento Veracruzano. Ngaphezu kwalokho, kwanezelwa izesekeli nemihlobiso.
Lapho sesiwenzile umlando omncane, sekuyisikhathi sokuchaza ngokufingqiwe nangemininingwane yokuthi imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz injani.
Injani isudi ye-jarocho
Ngokusobala, ukuchaza imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz, kufanele sihlukanise phakathi kwezingubo zabesifazane nalezo zabesilisa. Kodwa-ke, bobabili banezinhlelo ezimbili ezivamile: umbala omhlophe nezindwangu ezilula efanele ukushisa.
Imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz yabesifazane
Izembatho ze-jarocha zabesifazane muhle nakakhulu kunalokho obekuhloselwe amadoda, ngoba sekwenzekile ngentambo engaphezulu, imifekethiso nemihlobiso. Izinto eziyisisekelo zale mvunulo yilezi ezilandelayo:
Ihembe lohlobo ingubo yokulala okumhlophe okwenziwe ngokotini kanye ne "mesh" emahlombe nasesifubeni. Lokhu kusho ukuthi, kulezo zingxenye, zinemifekethiso ngendlela yegridi. Ngaphezu kwalokho, kuphelile entanyeni nge-barrette eyenziwe ngentambo kasilika.
IPetticoat nayo imhlophe futhi ibobelwe ezansi esetshenziswa njengesizinda.
Una isiketi indiza ende kakhulu futhi ebanzi ngaphezulu kwepitikoti elimboze amaqakala futhi nalo ngokuvamile elimhlophe. Ngokufanayo, kuhlotshiswe ngakho imifekethiso futhi ngokuvamile unayo ingcina.
Apron mfushane nge-velvet emnyama futhi efekethisiwe ngezimbali ezinombala obomvu kanye nentambo egobile. Iboshwe okhalweni esebenzisa i- a iribhoni kasilika ebhandeni lakhe kukhona u- bandana eyenziwe ngokotini, okungukuthi, iduku elikhulu elenziwe ngendwangu ephrintiwe enemibala emibili.
Una mantilla noma itshali elingenziwa ngentambo noma nge-tulle efekethisiwe. Ibekwa emahlombe anamathiselwe esifubeni ngokusebenzisa i ilokhethi noma i-cameo ukugqamisa umugqa wengubo yokulala ngaphansi.
Un itshali noma itshali lesibili elinwetshiwe elenziwe ngentambo kasilika futhi elihlanganiswe neribhoni elihlobisa izinwele.
Owesifazane ogqoke imvunulo ye-jarocho
Kanye nakho konke okungenhla, imvunulo ejwayelekile yeVeracruz yabesifazane ifaka phakathi izesekeli ezahlukene y isitayela sezinwele esithile. Ngokuphathelene nalezi zamuva, iqukethe i-bun nama-braids amabili ahlotshiswe ngekhanda njengekama, elibizwa nangokuthi cachirulo. Ekugcineni, izinwele zihlotshiswe ngama-gardenias noma ama-roses abekwe ohlangothini olulodwa noma kolunye lwekhanda kuya ngesimo somshado womuntu. Uma engashadile, baya ngakwesobunxele, kanti uma eshadile, baya kwesokudla.
Ngokuqondene nezesekeli zemvunulo ejwayelekile yaseVeracruz yabesifazane, a fan ilenga entanyeni esebenzisa a ikhola. Lokhu ngokuvamile kuyigugu lomndeni. Kungenziwa ngegolide noma amaparele, kodwa futhi ne-coral noma i-filigree. Ekugcineni, kwezinye izimo isiphambano siphinde sigqokwe entanyeni ngentambo ye-velvet.
Imvunulo ejwayelekile yeVeracruz yamadoda
Okuningi kulula kakhudlwana ukuthi okungenhla kuyimvunulo ejwayelekile yaseVeracruz yamadoda. Kodwa-ke, futhi ihle kakhulu futhi, njengoba sikutshelile, ivelele umbala omhlophe wazo zonke izingubo. Kulokhu, okubaluleke kakhulu yilokhu okulandelayo:
Un amabhulukwe eyenziwe ngendwangu entsha efinyelela ezinyaweni, okungukuthi, ngokungafani nezinye izembatho ezijwayelekile, akuyona ingubo noma ubude bamadolo.
Una guayabera noma ihembe elinemikhono emide, elikhululekile futhi elenziwe ngendwangu elula nezikhwama ngaphambili. Imvamisa inezicelo zokukunikeza ukuthinta kobuhle.
Thayipha izicathulo bamba nombala omnyama noma omhlophe.
Isigqoko sesundu enemigqa emine endaweni yayo engenhla (okubizwa ngokuthi "ngamatshe").
I-Palliate noma iduku elikhulu ngemibala egqamile, okungcono kubomvu nokumnyama, entanyeni.
Njengoba sikuchazile futhi ungathola encazelweni yethu, imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz yamadoda incane kakhulu kunaleyo yabesifazane. Noma kunjalo, Ihlangana ngokuphelele nalokhu.
Izakhamizi zeqembu laseVeracruz ngemvunulo ejwayelekile
Kusetshenziswa nini imvunulo ejwayelekile ye-jarocho
Ngokuvamile, imvunulo ye-jarocho isetshenziswa ku noma yimuphi umcimbi we-folkloric noma iholide eligujwa esifundeni saseVeracruz. Amaqembu amaningi omdanso wesintu awusebenzisa, ngokunembile, ukutolika i- Ziyi-jarocho noma i-zapateado. Kunezinhlobo ezimbili zemidanso: izithandani futhi okuthiwa "Kusuka enqwabeni" ngokudansa eqenjini.
Umculo ohambisana nawo udlalwa ngawo izinsimbi zomdabu ngokulinganayo njenge-jarana, isigingci esincane; okudingekayo, okuvela emndenini ofanayo nowangaphambilini; ihabhu, isigubhu nomhlathi wembongolo, elokugcina elokushaya ngomculo. Kuwo wonke atolikwa imiculo yemvelaphi yabantu abampofu, amanye awo asedume umhlaba wonke. Ngokwesibonelo, La Bamba, I-hustler o Isiraphu esile.
Ziyahunyushwa futhi huapangos, imiculo ngesikhathi sesiginesha esivela esifundeni, ngisho nezigqi zemvelaphi yase-Afro-Caribbean njengeDanzon edumile yaseCuba.
Ngakolunye uhlangothi, uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi le mikhosi yenzeka nini. Ngakho-ke, uma kwenzeka uhlela ukuvakashela iVeracruz, ungenza uhambo lwakho luqondane nabo. Olunye lwezinsuku ezikhonjisiwe ngu umkhosi womkhosi kusuka edolobheni laseVeracruz uqobo, oluchazwa ngokuthi "lujabule kakhulu emhlabeni."
Kepha umhlaba waseJarocho uthole indawo yokuhlala edolobheni lase UJaltipan, kusuka esifundeni saseVeracruz uqobo. Ekupheleni konyaka leli dolobha lihlela i- Umkhosi weFandango, ehlanganisa abaculi bomculo abathandwayo abavela kulo lonke izwe ngisho nakwamanye amazwe. Ngakho-ke, imisindo ye-jarocho nemidanso ayikwazi ukungabi khona kulo mcimbi.
Ngokufanayo, isiko laseJarocha linezimpande ezijulile edolobheni laseCórdoba, elibizwa nangokuthi Lomas de Huilango, kuze kufike ezingeni lokuthi ihlela i- Ukuhlangana kweNdodana uJarocho okubandakanya imibukiso enemvunulo ejwayelekile yeVeracruz. Kepha futhi neminye imisebenzi efana nemihlangano yokufundisana, imihlangano, izingqungquthela kanye nemisebenzi ye-gala ukulondoloza leli siko lendabuko lombuso waseVeracruz.
Ekugcineni, sizokutshela ngomuzi wase I-Tlacotalpan, etholakala ngqo emikhawulweni yesigodi sasePapaloapan, lapho, njengoba sikutshele khona, imvunulo ye-jarocho yazalwa. Kuleli dolobha elihle, elimenyezelwe isikhungo salo esingumlando Amagugu amasiko obuNtu, kugujwa ngomhla ka- Ukuhlangana kweJaraneros neDecimistas. Kungumkhosi obekelwe ukugcina zonke izingoma zomculo ezihlanganiswe ndawonye ku-son jarocho futhi uphakathi kwemicimbi ebaluleke kakhulu ye-folkloric kuyo yonke iMexico.
Sengiphetha, sikuchazelile ukuthi uyini umsuka we- imvunulo ejwayelekile ye- Veracruz, kanye nezingubo ezakha abesifazane nabesilisa. Futhi, ngokufanayo, imiphi imikhosi ethandwa kakhulu ukuyigqoka. Kunoma ikuphi, kungenye yezingubo zendabuko ezine- kunezimpande futhi kwaziswa kakhulu ezweni lonke laseMexico.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Imvunulo ejwayelekile yaseVeracruz